SIFOOYINKA HANNAANKA SII KORDHAYA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Ugu Weyn Ee Xakamaynta Cayayaanka
Bubbleplay: degitaanka iyo daryeelka
Dhammaan dhirta xayawaanka ee hadda jira, kaadi-haysta ayaa ugu yaraan dalbanaya daryeelka, waxaana badanaa loo isticmaalaa daawo. Hoosta, waxaan si faahfaahsan u baran doonaa noocyada ugu caansan ee geedkan, qaabka dhalmada iyo sida loo daryeelo kaadida kaadiheysta.
La kulan xumbada
Kaadi - Waa geed cagaaran ah, faa'iidada ugu weyn ee koritaanka degdegga ah, wax qabad la'aan, iyo muuqaal muuqaal leh, oo sii socota inta lagu jiro xilliga sii kordhaya. Ciyaarta xayawaanka waxay u muuqataa mid cajiib ah marka ay abuurayso qaababka naqshadaynta muuqaalka, tan iyo xataa dabbaaldegyo aad u fiican.
Dibedda, geedku waxaa lagu gartaa joogitaanka laanta caleemaha, taas oo miisaankiisu hoos u dhaco, waxoogaa boodboodo dhulka, sameynta taaj loo dhan yahay. Bloom buuxa, xajmigu wuxuu gaari karaa 3 mitir oo dherer ah iyo isku midka dhexroorka.
Ma taqaanaa? Xilliga ubaxu ka yimaado astaamaha kaadiheysta maaha mid aad u dheer, laakiin inflorescences waxay ku dhowaan kartaa gebi ahaanba geedkii. Dhamaadka ubax ugu yaraan ugu yaraan soo jiidasho leh ayaa lagu sameeyaa geedka..
Iyada oo caleemo iyo burooyinkeeda, geedaha xajmiga waxay u eg yihiin viburnum. Si kastaba ha noqotee, waxay kuxirantahay nooca iyo noocyada kala duwan, geedkan wuxuu yeelan karaa midab kala duwan oo caleemo ah iyo ubaxyo.
Noocyada iyo noocyada ugu waaweyn ee ku xoortay geedihii
Noocyada finanku way kala duwan yihiin. In floriculture, laba kaliya ayaa loo isticmaalaa - Amur iyo Kalinolistny, taas oo, si kastaba ha ahaatee, waxaa matala noocyo badan.
Waxaa lagu kala gooyay dhererkeed - qiyaastii 3 m, iyo sidoo kale si fiican u siman ee caleemaha casaanka ah-brown, jilif ku on kaas oo kaliya da'da da'da ah waxay bilaabaan in ay ka dhejiyaan off cajladaha dheer oo si fiican u taagan. Waxay leedahay caleemo ballaadhan - illaa 10 cm oo saldhig leh wadnaha, mugdi madow oo mugdi ah iyo hoostoodaba daboolay timaha.
In ubaxyada noocyada blister, 10-15 ubax waa la tirin karaa, 1.5 cm dhexdhexaad ah, ubaxoodu wuxuu soconayaa 3 asbuuc, ka dib marka miraha u muuqdaan in ay ugu dambeyntii heleen midab casaan ah.
Buunadaani waxay u adkaysataa xitaa xilliyada qaboobaha, iyo sidoo kale inay si ammaan ah u qaadan karaan xididada beeritaanka kooxeed. Noocyada ugu caansan ee Amur bubblegrape, oo laga arki karo sariiro dadka deggan xagaaga, waa:
Luteus - geed ku caleemo dhalaalaya oo cagaar ah, taas oo u dhaw deyrta helitaanka baalal naxaas ah oo soo jiidasho leh;
Aureomarginat - xuduudaha madow-dahabka ee caleemaha;
Nana waa calyad amur ah oo leh caleemo cagaaran oo cagaaran, laakiin ubaxyo aad u soo jiidasho leh.
Sidoo kale waa geed dhererkeedu sarreeyo oo leh dhar qaro wayn. Caleemaheeda ayaa laga heli karaa 3 illaa 5 xawaare iyo xiiro oo ku yaal geesaha. Dusha sare ee xitaa waxay ka madow tahay hoosta.
Ubaxyada kaadiheysta caliniforus waa yar yihiin, kaliya 1.2 cm dhexroorka, laakiin waxaa laga yaabaa in aysan ahayn midabka cad, laakiin sidoo kale waa mid casaan leh leh stamens guduudan. Miro ayaa dib u casriyeeya marka ay qaangaadhayaan. Beeridda noocan ah ee geedkan ku jira qaybta kooxda ayaa sidoo kale suuragal ah. Noocyada ugu caansan waa:
Darts Gold waa dherer dhererkiisu sarreeyo oo dhan 1.5 m Waxaa lagu kala duwan yahay cufnaanta caleemaha iyo caleemaha huruudka ah ee cagaarta yar yar xaga xagaaga. Waxaa laga yaabaa inuu leeyahay ubaxyo cas iyo midab cad.
Red Baron waa dherer 2-mitir leh oo leh ballaaran (qiyaastii 7 cm) caleemo guduud ah oo casaan ah iyo qaab cidhiidhi ah, taas oo ka dhigaysa iyaga si gaar ah cajiib ah. Ubax ee noocyo kala duwan yihiin kuwo waaweyn - ilaa 5 cm, leeyihiin jilicsan casaan. Miraha waa casaan, waxay ka kooban yihiin 3 ama 5 joodar leh calaamado. Kala duwan tani waxaa lagu qiimeeyaa beeralayda ugu badan.
Lady in Red - kala duwan yihiin height of ay duurka ee 1.5 m iyo caleemo cas oo iftiimaya. Run, waqti ka dib, caleemo madow. Bloomkan kala duwan ee ubaxyada casaanka ah.
Diablo - krasnolistny bractoria ilaa 3 m sare leh caleemo guduudan ama madow.
Waa muhiim! Marka ay sii korodho xayawaanka Diablo ee hooska ah, caleemuhu waxay noqon doonaan cagaar ah oo leh hooskii madow. Sababtan awgeed, way ka fiican tahay in lagu beero meelo iftiin leh.
Ka tegidda xumbadu waa lagama maarmaan si ay dhirta u gaarto heerka ugu sarreeya ee horumarkeeda - labadaba koritaanka iyo ubaxaba. Iyo inkasta oo, guud ahaan, geedkan tani ma dalbanayo inuu daryeelo, ninkii beerta oo idil waa inuu ogaadaa waxyaabaha qaar.
Doorashada meesha saxda ah iyo degitaanka
Beerta kaadiheysta waa hawl aad u muhiim ah, maaddaama ay ku lug leedahay oo kaliya maaha inaad doorto meel wanaagsan oo baadiyaha ah, laakiin sidoo kale diyaarinta ciidda, taas oo ku dareysa macdanta muhiimka ah. Dhaqan ahaan noocyada kala duwan ee Bubbyfondnik waxay si fiican u qaadaan xididaha labada dhinac ee qorraxda iyo kuwa gebi ahaanba hoos u dhacaya. Bacnaanshaha carrada ee isaga laftiisu ma laha qiime la'aan, waxa ugu muhiimsan waa in biyuhu dhulka aaney u iman dusha sare, dhulka dhulka laftiisa waa in aan loo dulqaadan lime.
Waa muhiim! Goobaha hoose ee isku dhafan ee lime waxay keeni karaan horumarinta cudurkan oo kale ah ee ku xoortay geedaha sida chlorosis, iyo sidoo kale ka ba'aya nidaamka xididka. Sidaa darteed, xitaa haddii marka hore baadiyaha muujinaysaa koritaanka wanaagsan, waxay ugu dambeyntii ku dhamaataa waqti dambe.
Beeridda xumbo ayaa la samayn karaa wakhti kasta oo sanadka ah, marka laga reebo jiilaalka, laakiin ugu waxtarka badan ayaa noqon doona transplanting xumbo xilliga gu'ga, tanina waa waqtigii saxda ahaa ee lagu baadhi lahaa baadiyaha meel cusub. Beerto, waxaad isticmaali kartaa barta ugu caansan ee Bacriminta, ama carrada madow.
Waraabinta joogtada ah iyo dharka
Biyaha boodboodku waxay jecel yihiin biyo waxayna u dhiman karaan inta lagu jiro abaarta. Sidaa darteed, baadiyaha qaangaarka ah ee xagaaga kulul waxaa lagula talinayaa in la mariyo laba jeer toddobaadkii, adoo isticmaalaya ilaa 40 litir oo biyo ah. Sidoo kale ogsoonow in biyaha kiis kasta ha ku dhaco caleemaha iyo inflorescences ee kaadiheysta kaadiheysta - taasi waxay keeni kartaa gubasho. Sidoo kale, waraabinta waa in la sameeyaa mid hore aroortii ama fiidkii habeenkii.
Ka dib waraabin kasta, ciidda waa la mulched, laakiin haddii aadan samayn tan, ka dibna ugu yaraan soo saar haramaha ka yar baadiyaha iyo gubi. Sida loogu talagalay takooridda la beegsanayo, waxaa la qabtaa hal jeer xilliga gu'ga, iyo xilliga dayrta:
Guga, 250 g oo ah mullein, 1 qaado oo ah cusbada iyo 1 qaado oo ah HOL waxaa lagu kala diraa 10 litir oo biyo ah waxaana xalka loo isticmaalaa in lagu waraabiyo duurka. Xasuuso in hal qof oo qaangaar ah uu u baahan yahay qiyaastii 15 litir oo bacriminta ah.
Xilliga dayrta, 2 qaado oo ah nitroammofoski waxaa lagu qasi karaa 10 litir oo biyo ah iyo waraabiyo hareeraha. Xaddiga bacrimin looga baahan yahay waa isku mid sida guga.
Gooyo balaastik waa in si joogto ah loo sameeyaa, taas oo u oggolaan doonta inay samayso qaabka saxda ah ee baadiyaha. Manjooyin rasmi ah ayaa lagu talinayaa in la sameeyo guga, halka aad rabto in aad hesho baadiyaha ballaaran, dhammaan caleemaha waa in la gaabin ilaa 1.5 m, haddii dheer iyo ilo-sida - saaro dhammaan caleemaha khafiif ah oo ka tago dhexda 6 ee ugu xoogga badan.
Laakiin marka laga reebo tan, guga oo idil, mindhicirka kaadiheystu wuxuu u baahan yahay manjooyin nadaafadeed, taas oo ku lug leh inay ka saarto caleemaha jabay oo ay saameeyeen cuduro kala duwan. Sidoo kale la soco in aysan jirin laamo geedo ka soo baxa, oo aan dibedda ahayn. Haddii ay jirto - waa in sidoo kale laga saaraa. Ujeedooyinka nadaafadda, xumbada lafdhabarta ayaa la jarjaray xitaa xilliga jiilaalka, sidaas darteed dhaladooda caleemaha yar yar lama qaboojin.
Lixdii sanoba mar, baadiyaha waxay u baahan tahay manjooyin cusub, kaas oo caleemaha oo dhan laga saaro dhagax hoose. Ka dib markii manjooyin sida, caleemaha qaro weyn waxay u baahan doonaan in lagu daweeyo beeroole beerta si looga ilaaliyo dhirta cudurada.
Waa muhiim! Haddii aad heshay sapling yar yar ee geed xumbo, waxa fiican in la doorto kala duwanaanta nidaamka xidid xiran, taas oo ah, dhirta kuwa lagu beeray dheriga. Marka hore, waxay ku siin doontaa dammaanad ah in dhirta la qaadi doono iyo in aysan waxyeello u geysanayn xididada, iyo marka labaad, in dhirta la koray boorash oo run ahaantii wakiil ka ah noocyada kala duwan ee aad rabto inaad hesho.
Tan iyo markii uu helo safar ka yimaadda astaamaha kaadiheysta waa mid ganacsi qaali ah, waxaad isku dayi kartaa inaad dacaayadiso naftaada. Qaabab kala duwan ayaa loo adeegsadaa ujeedadan, mid kasta oo ka mid ah ayaa leh faa'iidooyinkiisa.
Gooyn ayaa laga goostay caleemaha yar yar ee baadiyaha qaangaarka ah ka hor inta uusan bilaabmin ubax. Goynta tan waxaad u baahan tahay gabal dherer ah 10-20 cm, taas oo 2-3 internodes waa inay joogaan. Ka dib jarida, caleemaha waxaa laga saaraa xagga hoose ee jarista, oo gaaban qaybta qaybta sare.
Qeybta hoose ee gooyn waa qoyaan kobcinta abuurista xididka (xal ka soo xidid waa mid qumman) oo lagu beeray sariirta peat iyo ciid. Ka dib, waxay sidoo kale u baahan yihiin inay ku shubaan oo daboolaan polyetylen. Ka hor inta biqilka buuxa, gooynta u baahan tahay waraabinta wareega iyo hawo. Xilliga jiilaalka waxay u baahan yihiin in si wanaagsan loo daboolo, guga waxaa lagu beddeli karaa meel joogto ah.
Dib u dhigid
Ku dhajinta xayawaanka dhirbaaxada leh ee gacan ka geysashada khariidadda waxaa ku jira in la aaso caleemaha yar yar dhulka, kaas oo ugu badan dhulka. Ka hor inta aanad qodin, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro caleemaha oo dhan, laakiin marka laga reebo kuwa koraan on top iyo aan la dabooli doonaa dhulka. Qoto dheer ee grooves ee gooyn waa in aanay noqon wax ka badan 12 cm.
Laantu waa in la waraabiyaa iyo weedh, xaji ciidda u dhow. Markaas dayrta waxaa laga yaabaa in laga soocaa baadiyaha weyn, laakiin hubi inaad daboosho jiilaalka. Guga geedka waxaa lagu wareeri karaa.
Tani waa habka ugu sahlan ee lagu dhalan karo kaadiheysta, sababtoo ah waxay ku lug leedahay oo kaliya qodaya baadiyaha ka soo ciidda waxayna u qaybisaa dhowr qaybood. Taas ka dib, qayb kasta qayb ahaan ayaa lagu aasay, kaas oo dhawaan u oggolaan doona in uu u koro xajmigiisa asalka ah. Aad bay muhiim u tahay in la sameeyo dhamaan tallaabooyinka sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si looga hortago in xididada laga qallajiyo.
Nidaamka tarankani waa kan ugu yar ee la aqbalo kaadiheysta beerta., sida geedo koray oo aan had iyo jeer helin sifooyinka isku midka ah sida duurka ka kaas oo miraha la qaaday.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad wali go'aansato inaad ku dhufato miraha xumbada leh miraha, markaa waa in la ururiyaa xilliga dayrta oo hubi inaad u kala baxdo - u soo dhig xaaladda xaaladaha qaboobaha, taas oo ah, ku rid qaboojiyaha illaa bil. Waxaad iyaga ku beeran kartaa labada guga iyo dayrta.
Isticmaal irbadda kaadiheysta ujeedooyinka daawooyinka
Cabbitaanka bacda ee daawada dadku waxay la xiriirtaa tiro badan oo ka mid ah sifooyinka wanaagsan ee warshadan, sidaa darteed, bikaadiska waxaa badanaa laga sameeyaa caleemo. Joogista koontada waxaa ku dhici karta jidhka bini'aadamka kiniinka hurdada oo daciif ah.
Caleemaha qanjidhada kaadiheysta waxay sidoo kale ku jirtaa carbonylic acid phenyl, kaas oo leh saameyn bactericidal ah. Warshadaha cuntada waxaa loo isticmaalaa sidii antiseptic.
Ma taqaanaa? Muuqaal noocan oo kale ah ee noocyo badan oo ah finan, sida caleemaha guduudan ama caleemo casaan leh, waxay la xiriirtaa awoodda loo leeyahay inuu soo saaro chlorophyll. Waa caan ku ah dhirta oo idil, laakiin waxay u muuqataa inay u dhowdahay xilliga dayrta. Laakiin xubnaha kaadiheysta waxay u kuurgalaan xilliga oo dhan xilliga koritaanka.
Cudurada iyo cayayaanka ee astaamaha kaadiheysta: calaamadaha iyo daaweynta
Dhiroonka ayaa aad u adkaysi u ah dhammaan noocyada cudurrada iyo cayayaanka, sidaa daraadeed waxay ku dhowdahay in ay la dagaalamaan. Run, haddii dhirta la nadiifiyo oo la waraabiyo, waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo chlorosis, taas oo lagu tilmaami doono caleemaha yellowed ee caleemaha yar yar. Si aad u ilaaliso baadiyaha oo dhan qalajinta buuxda, ku dawee diyaar garaynta birta - "Anti-chloro", "Ferryle", "Ferovit", "Iron Chelate". Iyadoo xalinta diyaargarasyadan, duurka ayaa la buufin karaa sidoo kale ku shubaa xididka.
Gogolka ku haboon ee lafta kaadiheysta ayaa sidoo kale loogu talagalay ka hortagga suurtagalnimada in uu cuduro ku kaco. Sidaa darteed, ka dib markii manjooyin kasta, caleemaha oo dhan waxaa lagula talinayaa in lagu daaweeyo garoonka beerta.
Guud ahaan, qaabka kaadiheystu maahan mid daryeel ah. Haddii aad bixiso dareenka ugu yaraan hal mar bishii oo aadan iloobin inaad biyo qabatid, beertaada ayaa had iyo jeer lagu qurxin doonaa baadiyaha ballaaran, taas, xitaa kadib ubaxyada qalalan, waxay ku farxi doonaan miraha dhalaalaya.
Hoosudhaca coopda digaaga xilliga qaboobaha iyo noocyada kala duwan
Khasaaro aan qabyo ahayn oo caan ah Ruushka Cad
Dhibaatooyinka beerta - maxay tahay basil-qaadashada iyo sida loo hirgeliyo?
Cunto-qabka toon: cuntooyinka, barafaysan, la shiilay
Wakiilka awoodda leh ee "Calathea Saffron": qaababka daryeelka guriga
Eggplant - mid ka mid ah khudaarta ugu caansan, kaas oo caan ku ah dhadhanka basbaas. Waxaa jira fursado badan oo loogu talagalay suxuunta, laakiin dhammaantood diyaar uma ahan inay kugu guuleystaan ​​adigoon dhadhanka. Milkiilayaasha waayo-aragnimo ee degaannada magaalooyinka ku-meel-gaadhka ah waxay isku dayayaan inay doortaan noocyada jilicsan iyo noocyo casiir leh ee eggplants, kuwaas oo aan lahayn qadhaadh dabeecad. Read More
Waxa la sameeyo haddii looxa laga helo geed geedka geedaha: hababka wax looga qabto cayayaanku
Waxaan ku koray klivia guriga: qarsoodiga iyo taranka taranka ee boodhka tropical tropical
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Xakamaynta Cayayaanka 2019